18°54′00″S 47°47′00″E﻿ / ﻿18.900000°S 47.783330°E﻿ / -18.900000; 47.783330
Isam-ponina 6 650 mponina
Sambaina dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Manjakandriana, Faritanin'i Antananarivo. Ny isam-poniny dia 6650 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 10603 ary ny kaodin-distrika dia 106
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 5-25%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia haricot. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mangahazo. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isan'omby dia 815. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana lafo vidy indrindra dia pomme de terre. 10 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 85 ny mponina no miasa tany. 15 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 91 no isan'ny kisoa.
Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Tsy ny JIRAMA no manome ny rano.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 0 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 0 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 3500 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 3500 Fmg.
1 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 74 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 6 volana. 5 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 20 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiarovana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiarovana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina. Misy masoivohon'ny ministeran'ny mponina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sambaina&oldid=952765"
Voaova farany tamin'ny 17 Novambra 2018 amin'ny 15:44 ity pejy ity.